France: Kombuyuutarrada dawladda oo weerar lagu hayo - BBC Somali
France: Kombuyuutarrada dawladda oo weerar lagu hayo
Image caption Kombuyuutarrada dowladda ayaa la isku dayey in la jabsado marar badan
Wasiirka gaashaan dhigga Faransiiska, ayaa sheegay in sannadkii hore afar iyo labaatan kun oo weerar oo xagga internet-ka lagaga soo qaaday kombuyuutarrada wasaaradda gaashaan dhigga la fashiliyey.
Jean-Yves le Drian ayaa sheegay in weerarrada noocan ahi sannad ba sannadka ka dambeeya ay laban laabmayeen. Waxaanu digniin ku bixiyey in shabakadda kombuyuutarrada Fransiisku khatar ku jirto, suurto gal na ay tahay in sannadkanna la qaado isku dayo lagu xagal daacinayo doorashooyinka Faransiiska ee sannadkan dhici doona.
Mudane Le Drian wuxu dusha kala socday hawl gal ballaadhan oo dib loogu habaynayo kartida internet-ka ee Faransiiska, kaas oo taliyaha ciidanka loogu dhiibayo hogaanka xarun cusub oo lagu magacaabay Cybercom.
Wuxu hadalkan sheegay mar uu waraysi siinayey wargeyska Faransiiska ah ee Le Journal du Dimanche, waxaanu ku soo beegmay maalmo uun ka dib markii sirdoonka Maraykanku xaqiijiyeen in Ruushku isku dayey inuu fara-geliyo doorashadii madaxtinimada Maraykanka ee dhacday bishii November, inkastoo eeddaa Ruushku beeniyey.